FIHINANANA ATSANTSA : Zazalahy iray 13 taona maty, 03 hafa mbola manohy fitsaboana
Ny tolakandron’ny 23 marsa 2020, tovolahikely iray 13 taona no nindaosin’ ny fahafatesana vokatry ny fihinanana atsantsa tao Sambava, raha ny angom-baovao voaray avy any an-toerana. 25 mars 2020
Raha ny fanazavana voaray, ny alahady 22 marsa 2020 no nahazo zanaka atsantsa ireto mpanjono tao Anjiakely, Kaominina Farahalana, Distrika Sambava. Nifampizaran’izy ireo tamin’ny mpifanolo-bodirindrina moa izany ka dia samy nihinana avokoa ny rehetra. Raikitra ny fandrahoana ilay hazan-drano be. Voalaza tamin’izay fotoana izay moa fa dia noendasina hatramin’ ny atiny ka dia samy nihinana daholo. Ora vitsy taorian’ny nihinanana azy dia efa nitaraina sahady ity tovolahikely fa marary toa mavesabesatra izany, niitatra ny fitarainana ary toa samy nahatsapa avokoa ny rehetra izay nandray anjara tamin’ny fihinanana fa misy manindrona sy mavesatra ny vavonin’izy ireo.
Avy hatrany dia nandeha tobim-pahasalamana tao amin’ny CSB2 Farahalana izy ireo, ny alahady tokony ho tamin’ny 10 ora alina. Somary nampiahiahy ny mpitsabo ny fahasarotan’ny aretina nahazo azy ireo ka avy hatrany dia nanapa-kevitra izy ireo fa halefa ao amin’ny CHRR Besopaka, hopitaliben’i Sambava ilay zazalahikely. Natao ny ezaka rehetra saingy tsy tana intsony ny ainy ny alatsinainy lasa teo iny.
Etsy ankilany, mbola manohy fitsaboana avokoa hatreto ny iray tampo amin’ity namoy ny ainy ity, izay zazalahy 14 taona , ny anabaviny 15 taona ary ny rainy niteraka azy. Ny rainy aza dia voamarika mihitsy fa mbola tena mampiahiahy tanteraka ny toe-pahasalamany, mbola miraikitra tsy mahay miteny hatramin’ny vavany aza. Manoloana ny loza nanjo ity fianakaviana ity dia tonga nankahery sy nitondra fanampiana tamin’ny fitsaboana azy telo mianaka mbola marary tratran’ny fanapoizinana ara-tsakafo ity ny teo anivon’ny sampan-draharaha ny Jono ao amin’ny Faritra sava. Arahina akaiky moa amin’izao fotoana izao ny fivoaran’ny fahasalaman’ireto mbola tsaboina.